६० रुपैयाँको औषधि २४ सयमा विक्री ! – उजेली न्यूज
६० रुपैयाँको औषधि २४ सयमा विक्री !
प्रकाशित मिति : २० असार २०७७, शनिबार १७:३३
मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकका केही औषधि पसलले लकडाउनको फाइदा उठाउँदै बढी मूल्य लिई औषधि विक्री गरेको भेटिएको छ।
‘मेडिकलले अनियमितता गरिरहेको छ भन्ने सूचनाका आधारमा हामीले नै औषधि किन्न पठाउँदा त्यस्तो प्रमाण पायौँ’, उनले भने। उनका अनुसार सरकारले निःशुल्क एबोसनको औषधि वितरण गरे पनि बढीमा ६० रुपैयाँ पर्ने औषधिलाई सो मेडिकलले २४ सय
रुपैयाँ लिएको हो। त्यस्तै सोही मेडिकलले औषधि विक्री वितरण गर्दा बिल नदिएको पाइएको छ।
Previous: बझाङमा पहिरोले पुरिँदा मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुग्यो
Next: काेराेना संक्रमण भएका अफगानी राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको मृत्यु